‘गुन्डा नाइके’ सत्यमान छुटाउन नमानेपछि सांसद नबिना लामाको यस्तो हर्कत ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ‘गुन्डा नाइके’ सत्यमान छुटाउन नमानेपछि सांसद नबिना लामाको यस्तो हर्कत !
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार १५:०४
काठमाडौं-नेपाल प्रहरीले पक्राउ परेका ‘गुन्डा नाइके’ सत्यमान लामालाई छुटाउन दिएको दबाब अस्विकार गरेपछि ‘रुष्ट’ बनेकी सांसद तथा अनेरास्ववियुकी नबिना लामा बिहीबार गृह मन्त्रालयमा पुगेर आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेकी छिन्।
लामाले सांसदले विद्यार्थी संगठनको बदनाम गर्दै गृह मन्त्रालयल पुगेर प्रहरी प्रमुखको बर्खास्त माग गरेकी हुन् । आफुले भनेको नमानेपछि विद्यार्थी संगठनकै नाममा उनले गृहममन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी हुन्।
आईजीपीको बर्खास्त माग गरेलगत्तै अधिकांशले उनलाई सामाजिक संजालमा ‘उडाएका’ छन् ।गत असार २८ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरले गुन्डानाइके सत्यमान लामालाई पक्राउ गरेको थियो । तत्कालिन एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई दबाब दिएर लामालाई उनले छुटाएकी थिइन् ।
पछि फेरि लामालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले समातेको थियो। फेरि छुटाउन एसएसपी धिरजप्रताप सिंहसमक्ष पुगेकी लामा ‘गाली ‘खाएर फर्किएकी थिइन् ।
नेपाल प्रहरीको ‘क’ बर्गको गुण्डाको सूचीमा रहेका दावा लामाको सहयोगीका रुपमा काम गर्दै आएका सत्यमान लामाबारे लुटपाट, गुण्डागर्दी तथा अवैध डलर कारोबारबारे उजुरी परेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं उनलाई नियन्त्रण गर्न लागिपरेको थियो।
उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा पनि लिइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिए पनि लामाले हिरासतमा केहि घण्टा पनि बिताउन परेन।
म्याद थप गरेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको गुण्डालाई नेकपाको सांसद लामाको दबाबमा छाड्न एसएसपी पोखरेल किन बिबश भए परिसरमा चर्चा भएको थियो।
सत्यमानबिरुद्ध बुढानिलकण्ठका दिलीप लामाको २५ लाखको चेक धाकधम्की दिएर लुटपाट गरेको उजुरी समेत परेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको थियो।